News | पीसीआर
News | Tag: पीसीआर
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा जम्मा ९ हजार ४९१ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा हालसम्म १७ लाख स्वाबको परीक्षण भएको छ ।
आजको पीसीआर परीक्षण १२ हजार ३११
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १२ हजार ३११ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आजको पीसीआर परीक्षण १३ हजार ४४६
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १३ हजार ४४६ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
२४ घण्टामा १३ हजार २३ स्वाब परीक्षण
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १३ हजार २३ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
२४ घण्टामा ८ हजार २४८ स्वाब परीक्षण
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा ८ हजार २४८ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
जम्मा २ हजार ७२५ स्वाब परीक्षण, ३ हजार १६८ जना डिस्चार्ज
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा जम्मा २ हजार ७२५ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबारको पीसीआर परीक्षण १६ हजार ५३१
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १६ हजार ५३१ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
२४ घण्टामा १५ हजार ५७७ हजार स्वाब परीक्षण
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १५ हजार ५७७ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
२४ घण्टामा कति स्वाब परीक्षण ?
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १४ हजार ५३० स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
शनिबार भन्दा ६ हजार ९ सय कम परीक्षण हुँदा संक्रमितको संख्या पनि कम
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १२ हजार ४२७ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।